Maxaa ka dhigaya aaladda muhiimka ah ee Amazon keyword leh waxqabad dhab ahaan la qiyaasi karo?
Qof kasta oo yaqaan Nidaamka Raadinta (Search Engine Optimisation) wuxuu ogyahay in ay u dhowdahay in ay noqoto ganacsade ganacsi oo ku fiican Amazon iyada oo aan lahayn qalab muhiim ah oo sameeya waxyaabo badan. Yaa muhiim ah in la qaato doorashada saxda ah? Si fudud sababtoo ah waxaad u baahan doontaa inaad sii wadato kormeerka ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee wax soo saarka ah, sahaminta isku-daba-gal raadinta dheer-dheer, oo raadso fursadaha fursadaha wax-soo-saarka ee aanad ku jirin liiskaaga ilaa hadda.
Guud ahaan, ujeedada ugu weyn ee laga yaabo in wax kasta oo lagu kalsoon yahay Amazon keyword waa in la ogaado tartanka hooseeya ee keywords keyper shopper, iyada oo ayadoo ujeedada iibsashada aad u sarreeya si ay u caawiyaan si ay u kobciyaan macaamiisha mustaqbalka ee iibsadaha dhabta ah. Laakiin sida loo doorto ikhtiyaarka saxda ah kaas oo noqon doona mid ku habboon baahiyahaaga iyo ujeedooyinka ganacsiga? Hagaag, taasi waxay ku xiran tahay.
Waxyaalaha ay tahay in caawiye online ah oo wanaagsan oo macnihiisu yahay inuu kaa caawiyo inaad hesho ereyada muhiimka ah iyo jumlado raadin dheer oo dhajinaya oo ku dhisi doona ujeedada ugu badan ee user. Habkaas, waxaa la filayaa inuu kaa dhigo mugga raadinta sare. Ugu dambeyntii, si ay u keento tirad ka badan oo guulo ah si guul leh u fuliso suuqa Amazon, iyaga oo markaa siinaya iftiinka cagaarka si aad u wanaagsan kor u qaadistaada waqtiga. Xaqiiqdii, xal kasta oo cilmi-baaris ah oo muhiim ah - haddii ay tahay hal qalab cilmi-baaris oo muhiim ah, mareeg online ah oo leh qalabka caalamiga ah, qalabka raadraaca xirfadeed / otomaatigga, ama si gaar ah loo qoondeeyey soo-jeedin "furaha furaha" - waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo adeegyada soo socda iyo manfacyada:
Tirada ugu badan ee ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah.
Qiyaasta miisaaman ee raadinta.
Qiyaasta guud ee CPC.
Talooyinka muhiimka ah ee dheeriga ah.
Qiyaas ahaan heerka qiyaasta tartanka loogu qiyaaso.
Fahanka tartanka iyo raadinta fasalka.
Tani waxay dufaan buuxa leh Amazon keyword key kaa caawin kartaa inaad abuurto qadarka ugu badan ee keywords keywords, iyo shey dheer dheer raadinta weydiimo ee liiska alaabtaada si aad u hesho mar walba taakuleeyn, iyo inaad haysato fursad wanaagsan oo lagu muujiyo meel u dhow meesha sare ee raadinta wax iibsiga halkaas. Kuwa kale, SkyRocket waxay kaa caawin kartaa inaad si fudud u sameysid ilaa 200 keywords muhiim ah oo la xidhiidha ASIN gaar ah, ku siin talooyin wax ku ool ah keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan qiimeynta badeecadahaaga on sale, oo kaa caawinaya mudnaanta waxyaabaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah Hagaajinta liiska ganacsiga.
Waa ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo aad ku noqotid qalabka muhiimka ah ee Amazon, oo si buuxda u awood u leh inay ka shaqeeyaan dhammaan kuwa soo jeediyay keywords iyo inta ka harsan wadaagyada raadinta ballan-qaadka ee la xiriira alaabtaada / nooca. Iyadoo database-ka ballaaran oo daboolaya wax ku dhow 40 milyan oo ereyo raadin ah oo ay adeegsadeen dukaamada guryaha ee Amazon, Kormeeraha Keyword wuxuu ogsoon yahay dhammaan ereyada muhiimka ah ee sarreeya ee kuugu dhow. Oo adigana marnaba kuma faafi doontid qadar aad u ballaaran ama nooc kasta oo xog ah oo qashin ah - xitaa liiska keydarradaada 'keywords' keywords ee ku xiran kumanaan shuruudo raadin oo kala duwan ayaa si sahlan u noqon kara faafinta xisaabeed oo ay ku jirto xogta si fiican loo cayimay. Ha ilaawin inaad sidoo kale isticmaali karto qalabkan ballaaran si aad u wado ololahaaga PPC iyo inaad hagaajisid natiijooyinkaaga xayeysiinta si aad u sareeya Source .